Fiangonana Loterana Malagasy Archives - Page 3 sur 12 - Fiangonana FLM Orléans Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
HE TANIM-PAHAZAVANA BE! Fihirana FFPM 522
HE TANIM-PAHAZAVANA BE! Fihirana FFPM 522 HE TANIM-PAHAZAVANA BE! Fihirana FFPM 522 Mandova Lanitra, raki-kiran’ny Feon-Dehilahy FLM Ambatovinaky. Hira 522, iarahany amin’ny KT Ambatovinaky. —- 1. He, tanim-pahazavana be. Tsy misy maizina ao, Ka any tsy mba hitete Ny ranomasonao. Izay voavonjy hiangona ao, Hiara-mihira ny hira vaovao, Ho sambatra any an-danitra, Ao amin’ny …